“प्रवासी” हुनुको पीडा निरुता सिंहलाई (अनुशील) - [2006-04-07]
बाह्र वर्षअघि दार्जीलिङबाट आएर दक्षिणा बाट अभिनय शुरु गरेकी निरुता सिंह दुई पल चलचित्रसम्म आइपुग्दा सफल नेपाली नायिकामा दरिएकी छिन्। उनका ६० मध्ये दर्पण छायाँ, बन्धकी, आफ्नो मान्छे जस्ता एकदर्जन चलचित्र \_'हिट\_' छन्। विज्ञापन मोडलिङमा पनि उत्तिक्कै सक्रिय निरुताले भोजपुरी चलचित्र कबहोई मिलनवा हमार मा समेत सफल अभिनय गर्न भ्याएकी छिन्।
अहिले कुन फिल्ममा व्यस्त हुनुहुन्छ?
चलचित्र दुनियाँ को तयारी र मान्छेको माया को छायाङ्कनमा व्यस्त छु।
भोजपुरी चलचित्रमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो?
मलाई भोजपुरी एक शब्द पनि आउँदैनथ्यो, त्यसमाथि भोजपुरी फिल्मका सुपरस्टार रवि किशनसँग काम गर्नुपर्ने! तर केही गाह्रो भएन, रमाइलो अनुभव भयो। भोजपुरीको बजार यति � ूलो होला जस्तो लागेको थिएन। नेपाली फिल्म नचल्ने तराईका कतिपय � ाउँका दर्शकमाझ् पनि मलाई यसले चिनायो।
तपाईँ विज्ञापनमा निक्कै देखिन थाल्नुभएको छ, चलचित्र नपाएर हो कि?
हैन। पहिलेदेखि नै म छानेर एकपछि अर्को चलचित्र गर्दै आएकी छु। विज्ञापनमा काम गर्दा थोरै समयमा धेरै पैसा पाइने र उत्पादनहरूको प्रचारप्रसारका क्रममा थुप्रै दर्शकहरूलाई पनि भेट्न पाइने भएकाले त्यसमा मेरो रुचि छ।
विभिन्न भूमिका गर्दा कस्तो महसूस हुन्छ?
क्याम्पस पढ्ने \_'टिनएजर\_' होस् या ४/५ जना बच्चाकी आमा, कुनै पनि भूमिका गर्दा हाँसो, खुशी र दुःख, पीडामा म आफू निरुता सिंह हुँ भन्ने नै बिर्सने गरी डुब्छु।
नेपाली नारीको समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अहिले पनि गाउँका धेरै नारीहरू शोषण र पीडामा छन् भने शहरबजारमा नारीहरू पुरुषसँग हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढिरहेका छन्। तर पनि समग्रमा अवस्था अझ्ै उक्सन सकेको छैन।
यस क्षेत्रमा नारी सहभागितालाई समाजले कसरी हेरेको छ?
यसमा एकथरीले वर्षौँ अघिदेखि नै प्रश्न उ� ाउँदै नराम्रो भन्ने गरेका थिए। तर, अहिले यो क्षेत्रमा पढेका र सम्पन्न परिवारकाहरूको पनि सहभागिताले होला धेरै बाबु–आमाहरू आफ्ना छोरा–छोरी नायक–नायिका होउन् भन्ने चाहन्छन्।
नायक/नायिका बारे धेरै नराम्रा कुराहरू पनि मिडियामा आउने गरेका छन् नि?
अरूको कुरा गर्न म चाहन्न तर मेरो आफ्नै अनुभवमा चाहिँ यस्ता कुरामा एक प्रतिशत पनि सत्यता हुँदैन। मेरो त यहाँको रंग पत्रकारिताप्रति विश्वास नै मरेको छ। जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नेले त जसको बारेमा लेखिएको हो उसलाई पनि सोध्छ, प्रमाण पुर्‍याउँछ तर यहाँ त जे पायो त्यही लेख्ने गरिन्छ।
साह्रै चित्त दुखे जस्तो छ नि?
म यस क्षेत्रमा लागेदेखि नै केही मान्छे मेरो पछि लागेका छन्। उनीहरू किन मेरो यसरी खेदो गर्छन् मलाई थाहा छैन। “यो नेपाली हैन प्रवासी हो, यसलाई यहाँ टिक्न दिनुहुन्न” भनेर लाग्नेहरू पनि छन्। मेरो कामले गर्दा आज म यो � ाउँमा आइपुगेकी हुँ, कसैले मलाई दया गरेर काम दिएको त हैन नि!
त्यसरी प्रवासी भनेर खेदो गर्दा कस्तो लाग्छ?
मेरा दर्शकले कहिल्यै पनि निरुता प्रवासी, भारतीय हो भनेर भनेका छैनन्, मलाई माया गरी नै रहनुभएको छ। कसको हिम्मत छ मलाई यहाँबाट निकाल्ने? लौ, मलाई मेचीपारि पुर्‍याएर अर्को निरुता जन्माएर देखाउन् त? यत्रो माया गर्ने दर्शकको अगाडि २/४ जनाले के गर्न सक्छन्?
प्रसङ्ग बदलौँ, अब बिहे गर्ने बेला भएन?
उमेर त भइसक्यो तर मेरो कामको अहिले पिक टाइम छ, बिहे गरेपछि घरपरिवारलाई पूरा समय दिनुपर्छ। त्यसैले २/४ वर्षपछि मात्रै बिहे गर्ने।
लभ, एरेञ्ज कस्तो बिहे गर्ने अनि श्रीमान कस्तो होस् भन्ने चाहना छ?
\_'लभ प्लस एरेञ्ज दुवै मिक्स\_' भयो भने राम्रो हुन्छ। जुन मान्छेसँग जिन्दगी बिताउनु छ उसको बारेमा राम्रो बुझनुपर्छ। पहिले जस्तो कहिल्यै नदेखेको मान्छेसँग बिहे गरेर सम्झ्ौतामा जिन्दगी बिताउने पक्षमा म छैन। मेरो श्रीमान राम्रो संस्कार भएको मलाई बुझने, समझ्दार, आफूभन्दा सानोलाई आदर र � ूलालाई सम्मान गर्न जान्ने, समाजमा उभिएर चिनाउँदा पनि मैले गर्व गर्न सक्ने होस्।
त्यस्तो मान्छे भेटिसक्नु भो त?
अहँ, अहिलेसम्म भेटेको छैन।
• अनुशील श्रेष्�
तस्बिरहरूः किरण पाण्डे
NIru ji, tapai le khojeko jasto manchee ta ma chu ni. yadi jarurat parema pls free feel to contact me okey ?
loocking fardward you......... D.K.